အောလန်ဆိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
"အောလန်ဆိုင်း" (အင်္ဂလိပ်: "Auld Lang Syne") သည် စကော့ဘာသာစကားဖြင့် ၁၉၇၈ တွင် "ရောဘတ် ဘားန်ဇ်" (Robert Burns) ရေးသားထားသော ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်၍ ရိုးရာကျေးလက်သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် စီမံဖန်တီးခဲ့ကြသည် (ရိုးဒ်ကျေးလက်သီချင်းများစာရင်းအညွှန်း ၆၂၉၆ တွင် ပါဝင်(Roud # 6294) ။ နိုင်ငံအတော်များများ၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောနိုင်ငံများတွင်အလွန်လူသိများသောတေးတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ကာ နှစ်သစ်ကူးအကြိုည သန်းခေါင်ယံအချိန် ည(၁၂) ထိုးသံကြားချိန်၌ နှစ်ဟောင်းကို ခွဲခွာနှုတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့် သီဆိုရန်မှာ မူလရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ချဲ့ထွင်မှုအဖြစ် ဈာပနပွဲ၊ ဘွဲ့ယူအခမ်းအနားနှင့် အခြားသော ပွဲများတွင် နှုတ်ဆက်ခွဲခွာမှုအဖြစ် သီဆိုကြသည်။ နိုင်ငံအများအပြား၌ နိုင်ငံတကာကင်းထောက်လှုပ်ရှားမှုများတွင် အခမ်းအနားပိတ်ပွဲ၊ အခြားပွဲများ၌လည်း သီဆိုကြသည်။
ဤစကော့ကဗျာခေါင်းစဉ်ကို စံအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသို့ "old long since" (ဟိုး...လွန်ကတည်းက) (သို့) တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့်အနေအထားဖြင့် "long long ago" (ရှေးရှေးက)  "days gone by" (ကုန်လွန်ခဲ့သည့်နေ့ရက်များ) သို့ "old times" (အရင်ကအချိန်များ) စသဖြင့် ပြန်ဆိုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် သံပြိုင်ပိုဒ်ပါ ပထမစာကြောင်းဖြစ်သော "For auld lang syne" ကို "အရင်က (ပျော်ရွှင်/ကောင်းမွန်ခဲ့သော) အချိန်များအတွက်"(for the sake of old times) ဟူ၍ လျော့ရိလျော့ရဲပုံစံဖြင့် ပြန်ဆိုနိုင်ပေသည်။
"အောလန်ဆိုင်း" စကားစုကို ရောဘတ် အေတန် (Robert Ayton ; ၁၅၇၀-၁၆၃၈) ၊ အလန် ရမ်ဇီ (Allan Ramsay ; ၁၆၈၆-၁၇၅၇) ၊ ဂျိမ်းဇ် ဝေါ့ဆန် (James Watson ; ၁၇၁၁) နှင့် ဘားန်ဇ်မတိုင်မီ ပိုရှေးကြသော ရိုးရာကျေးလက်သီချင်းများတွင် သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။မက်သယူး ဖစ်သ်က စကော့ဘာသာဖြင့် ရိုးရာနတ်သား/သမီးပုံပြင်များကို ပြန်လည်ပြောဆို(ရေးသား)ရာ၌ "once uponatime" ဟူသောစကားစုအစား "in the days of auld lang syne" ဟူ၍ သုံးစွဲထားသည်လည်းရှိသည်။
ရောဘတ်ဘားန်ဇ်သည် မူလသီချင်း၏ မူပွားတစ်ခုကို စကော့ဂီတပြတိုက် သို့ ၁၇၈၈ တွင် အောက်ပါမှတ်ချက်နှင့်အတူ ပို့ပေးခဲ့သည်။ "အရင်ခေတ်သမယများက ရှေးဟောင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ အောက်ပါသီချင်းကို ကျွန်တော် အဖိုးကြီးတစ်ဦးထံက ပြောစကားတွေကနေ ကူးယူရေးသားခဲ့သည်အထိ စာအုပ်စာပေတွေမှာ ဖော်ပြဖူးခြင်းမရှိ၊ လက်ရေးမူတွေမှာတောင်မှ မရှိပါဘူး။" သီချင်းစာသားအချို့ကို ကဗျာဆရာက ဖွဲ့ဆိုသည်ဆိုတာထက် စုဆောင်းရေးသားခဲ့ကြသည်။ ဘဲလဒ် (သို့) ဘားလဒ် (ballad - ဇာတ်လမ်းပုံစံကဗျာ/ ခပ်လေးလေးဆိုကြသော အချစ်သီချင်း) သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော "Old Long Syne" အမည်ဖြင့် ၁၇၁၁ တွင် ဂျိမ်းဇ် ဝေါ့ဆန်၏ ပုံနှိပ်ခဲ့သောမူသည် ဘားန်ဇ်၏ ကဗျာနှင့် ပထမအပိုဒ် သံပြိုင်အပိုဒ်တို့တွင် တူညီမှုများရှိကာ တူညီသော ရှေးဟောင်းသီချင်းရင်းမြစ်မှ ဆင်းသက်မှုရှိသည်မှာ သေချာလုနီးပါးဖြစ်ပေသည်။
ဂျိမ်းဇ်ဝေါ့ဆန်၏ ဘဲလဒ်သီချင်းမှ ပထမအပိုဒ်ကို ရည်ညွှန်းကိုးကားရမည်ဆိုလျှင်
မူရင်းကဗျာနှင့် မြန်မာပြန် (သင့်တော်သလိုပြန်ဆိုထားခြင်း)
ခင့်ချစ်သဲနှလုံး ခုလေများတော့ အေးစက်မာကျော
ခင့်ချစ်ရင်ခွင် ခုလေများတော့ အေးစက်မာကျော
ကဗျာ၏ကျန်သောအပိုင်းများသည် ဘားန်ဇ်၏ လက်ရာဖြစ်သည်ဟုဆိုရန်မှာကား မလွန်ပေ။
ယနေ့ခေတ်တွင် အသုံးပြုနေသော သံစဉ်သည် ဘားန်ဇ် မူလအစရည်ရွယ်ခဲ့သော သံစဉ်ဖြစ်သည်၊ မဖြစ်သည်ကိုဆိုရန် ခက်ခဲသော်လည်း ထိုသံစဉ်ကို စကော့တလန်နှင့် အခြားသောကမ္ဘာ့နေရာများစွာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလျက် ရှိသည်။
စကော့တလန်၏ နှစ်ကုန်ရက် (သို့) နှစ်သစ်ကူးအကြိုညတွင် ဤသီချင်းကို သီဆိုခြင်းသည် စကော့ရိုးရာအလေ့အထဖြစ်လာခဲ့၍ မကြာမီကာလများတွင် ဗြိတိသျှကျွန်းစု၏ အခြားသောအစိတ်အပိုင်းများသို့ ပြန့်နှံ့သွားကာ (အင်္ဂလိပ်၊ ဝေလ၊ အိုင်ယာလန်သားများသာမက) စကော့သားတို့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ရွေ့ပြောင်းသွားကြသောအခါ၌လည်း ဤသီချင်းသည် ၎င်းတို့နှင့်အတူ ပါသွားကြသည်။
↑ Lang Syne။ Dictionary of the Scots Language။ 19 January 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Robert Burns – Auld Lang Syne။ BBC (23 April 2009)။
↑ ၃.၀ ၃.၁ The History and Words of Auld Lang Syne။ Scotland.org။
↑ Honeck၊ Mischa (2018)။ Our Frontier Is the World: The Boy Scouts in the Age of American Ascendancy။ Ithaca, New York: Cornell University Press။ p. 103။ ISBN 9781501716201 – via Google Books။
↑ Burns၊ Robert (1947) [Transcribed 1788]။ Maine၊ George Frederick (ed.)။ Songs from Robert Burns 1759–1796 (leather-bound sextodecimo)။ Collins Greetings Booklets (အင်္ဂလိပ် နှင့် စကော့တ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Glasgow: Collins Clear-Type Press။ pp. 47–48။ This book was purchased at Burns Cottage, and was reprinted in 1967, and 1973.
↑ ၆.၀ ၆.၁ nls.uk။ nls.uk။ 10 July 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 'Wee Reid Ridin Hood': Matthew Fitt and His Scots Fairy Tales in Deepest Bohemia (28 November 2004)။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Lindsay၊ Maurice (December 1996) ။ "Auld Lang Syne"။ The Burns Encyclopedia (New Third ed.)။ Robert Hale Ltd.။ ISBN 0-7090-5719-9။ 23 June 2010 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 December 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Traditional (2006)။ Auld Lang Syne။ Traditional Songs from Scotland။ Ukmagic.co.uk။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အောလန်ဆိုင်း&oldid=699875" မှ ရယူရန်
CS1 နိုင်ငံခြားဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ (ISO 639-2)
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။